Y. အက်စ် JAGANMOHAN REDDY ခေတ်, ဇာတ်, ဇနီး, မိသားစု, အတ္ထုပ္ပတ္တိ & ပို - နိုင်ငံရေးသမား
Y. အက်စ် Jaganmohan Reddy ခေတ်, ဇာတ်, ဇနီး, မိသားစု, အတ္ထုပ္ပတ္တိ & ပို
နာမည်အပြည့်အစုံ Yeduguri Sandinti Jaganmohan Reddy
နိုင်ငံရေးပါတီ •အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် (INC)
• Yuvajana Shramika Raithu ကွန်ဂရက် (YSR ကွန်ဂရက်)
နိုင်ငံရေးခရီး • ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် (INC) အတွက်မဲဆွယ်ခဲ့သည်
•အန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှရှိကဒဒါမဲဆန္ဒနယ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်လော့ခ်ဆာဘားရွေးကောက်ပွဲမှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရခဲ့သည်။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင်သူသည်ကွန်ဂရက်မှထွက်ခဲ့သည်
• ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်သူသည် YSR ကွန်ဂရက်ပါတီကိုကြေငြာခဲ့သည်
• ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်သူ၏ပါတီသည်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစည်းဝေးပွဲနေရာ ၁၇ ခုနှင့် ၁ Lok Lokha ထိုင်ခုံကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
• ၂၀၁၄ ခုနှစ်အန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်းသူ၏ပါတီရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ၁၇၅ နေရာနေရာ ၆၇ နေရာသာရရှိသည်
၂၀၁၀ ခုနှစ် Andhra Pradesh ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများတွင်သူ၏ပါတီသည်အမတ်နေရာ ၁၇၅ နေရာအနက် ၁၄၉ ခုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအာဏာရလာခဲ့သည်
အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက် N. Chandrababu Naidu
မွေးနေ့ 21 ဒီဇင်ဘာလ 1972
မွေးရပ်မြေ Andhra Pradesh ပြည်နယ် Kadapa ခရိုင်၏ Pulivendula ကျေးရွာ
ဇာတိမြို့ Kadapa ခရိုင်, Andhra Pradesh ပြည်နယ်
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် Nizam ကောလိပ်, Hyderabad
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် Nizam ကောလိပ်မှ B.Com
• ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် Nizam College မှ MBA
လိပ်စာ အိမ်အမှတ် 3-9-77 Pulivendla, Kadapa ခရိုင်၊ Andhra Pradesh ပြည်နယ်
အငြင်းပွားမှုများ • ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ယခင် ၀ န်ကြီးချုပ် P Shankar Rao က Reddy ကိုအသနားခံစာတင်သွင်းခဲ့သည်။ သူသည်ရူပီးငွေအမြောက်အများစုဆောင်းနေသည်ဟုသူ့ကိုအပြစ်တင်ခဲ့သည်။ Reddy ရဲ့ဖခင် Andhra Pradesh ၏ CM ဖြစ်စဉ် Crores ၄၃၀၀၀ ။ CBI သည် Reddy ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအချိုးအစားမမျှတသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသူ့အားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ CBI သည် Reddy အားစွဲချက်တင်မှု ၁၁ ခုကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
• ၂၀၁၇ ခုနှစ်Augustဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်သူသည်ယခင် Andhra Pradesh CM ကိုခေါ်ခဲ့သည် N. Chandrababu Naidu Mukhyakantri (အကြီးအကဲလုယက်သူ) တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်လမ်းအလယ်တွင်ပစ်ချခံရလျှင်မည်သည့်အရာမျှမှားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ လူအများအပြားကသူ၏ပြောဆိုချက်ကိုသူပြောသောဒေသသည်အလွန်အထိခိုက်မခံသောနယ်မြေဖြစ်ပြီးဝေဖန်မှုများနှင့်ပုံမှန်ဖြစ်ပွားမှုများရှိသည်ဟုလူသိများသည်။ TDP ခေါင်းဆောင် Mallela Rajshehar သည် Jaganmohan အားသူ၏မှတ်ချက်များနှင့်လူတို့အားလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ရဲအားတိုင်ကြားခဲ့သည်။
• ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် Reddy သည် Vishakhapatnam လေဆိပ်တွင်ရှိစဉ်စားနပ်ရိက္ခာတရားရုံးမှလူတစ်ယောက်သည် selfie ယူရန်သူ့ထံသို့လာခဲ့သည်။ Selfie ရိုက်နေစဉ် Reddy ၏ဘယ်ဘက်လက်ကိုဓားဖြင့်ခုတ်လိုက်သည်။ သူအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲခံရသူ J ကို Srinivas Rao ကအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
• ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်သူသည်အနောက် Godavari ခရိုင်ရှိ padayatra (ခြေလျင်ချီတက်ပွဲ) တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူကသူဟာခရိုင်ကို Alluri Sitarama Raju ခရိုင်အဖြစ်ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့ကြေငြာခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်လေယာဉ်၏ပုန်ကန်မှုအဖြစ် Sitarama Raju သည်အသိအမှတ်ပြုမှုများစွာမရရှိခဲ့ပါ။ TDP က Reddy အား Kshatriya (Raju) အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုအယူခံဝင်ရန်ဤသို့ပြောဆိုခြင်းကိုအပြစ်တင်သည်။ အရာအနောက် Godavari အတွက်ကြီးစိုးသည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ၁၉၉၆ သြဂုတ် ၂၈။
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် YS Bharati
Varsha Reddy (အသက်ကြီး)
•ဟာရှာ Reddy (အငယ်)
မိဘများ ဖခင် - Y. S. Rajasekhara Reddy (နိုင်ငံရေးသမားဟောင်း)
အမေ - Y. S. Vijayamma (နိုင်ငံရေးသမား)
နှမ - YS Sharmila Reddy (လူငယ်များ၊ နိုင်ငံရေးသမား)
ကားစုဆောင်းခြင်း • BMW X5 (2007 Model)
• Mahindra Scorpio ကား ၃ စီး (၂၀၀၉ မော်ဒယ်)
ပိုင်ဆိုင်မှုများ / Properties ကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော - ရူပီး 339,89 Crores
ငွေသား ရူပီး ၄၃၀၀၀
ဘဏ်အပ်ငွေများ ရူပီး 1,45 ကုresေ
အစုရှယ်ယာများ - ရူပီး 50,32 Crores
ရွေ့ပြောင်းနိုင်သော: ရူပီး။ 35,30 ကုresေ
•ရူပီးတန်ဖိုးရှိသော Andhra Pradesh ပြည်နယ်၊ Kadapa ခရိုင်၊ Vempalli Mandal ရှိစိုက်ပျိုးရေးမြေ။ 42 Lacs
•ရူပီးတန်ဖိုးရှိအန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှ၊ Bakarapuram Mandal၊ Kadapa ခရိုင်ရှိစိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သောမြေများ။4ကုresေ
•ရူပီးတန်ဖိုးရှိအန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှ၊ Bakarapuram Mandal၊ Kadapa ခရိုင်ရှိစိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သောမြေများ။3ကုresေ
•ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဆောက်အအုံ Banjara Hills ရှိ Hyderabad ရူပီးတန်ဖိုးရှိ။ ၁၄ ကုCroေ
•ရူပီးတန်ဖိုးရှိ Hyderabad၊ Banjara Hills ရှိလူနေအိမ်အဆောက်အအုံ။ 3,19 ကုresေ
ရူပီးတန်ဖိုးရှိအန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှ၊ Bakarapuram Mandal၊ Kadapa ခရိုင်ရှိလူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး ။ 8,80 Crores
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 1,25,000 + အခြားထောက်ပံ့ကြေးများ (Andhra Pradesh Assembly of MLA အနေဖြင့်)
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 510 Crores (2019 ၌ရှိသကဲ့သို့)
Y. S. Jaganmohan Reddy အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Jaganmohan Reddy သည် Andhra Pradesh မှအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။ သူသည်သမ္မတနှင့် Yuvajana Shramika Raithu ကွန်ဂရက် YSR ကွန်ဂရက်ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ဖခင် Y. S. Rajasekhara Reddy သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ Andhra Pradesh ပြည်နယ် ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။
သူ့အဖေသည်အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်တွင် (၂) နှစ်အမှုဆောင်ခဲ့ပြီးအန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှ၏ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ။ သေဆုံးခဲ့သည်။ သူ့အဖေကို Andhra Pradesh တစ်လျှောက်လုံးချစ်ခင်လေးစားခဲ့သည်။ သူသေတာကိုလူအများကြားတဲ့အခါသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေတချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေပြီးလူအများကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။
Jaganmohan Reddy သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Andhra Pradesh ရှိသူ၏ဖခင်အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့သည်။
Jaganmohan Reddy သူ့ဖခင် Y S Rajasekhara Reddy နှင့်အတူ
Jaganmohan Reddy Sonia Gandhi နှင့် Rahul Gandhi တို့နှင့်အတူ
သူသည် ၂၀၀၉ Lok Sabha ရွေးကောက်ပွဲကို Kadapa မဲဆန္ဒနယ်မှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 ခုနှစ်တွင်ခြောက်လသည်သူ၏ဖခင်သေဆုံးပြီးနောက်သူသည်မိမိအဘများအတွက် Odarpu Yatra (ဝမ်းနည်းကြောင်းခရီးစဉ်) စတင်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအဘ၏ထောက်ခံသူများနှင့်သူသေဆုံးသည့်သတင်းကိုကြားပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းသို့မဟုတ်သေဆုံးသွားသူများ၏မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Jaganmohan Reddy သည်သူ၏ဝမ်းနည်းကြောင်းခရီးစဉ်အတွင်း
၂၀၁၀ နို ၀ င်ဘာ ၂၉ တွင်သူသည်ကွန်ဂရက်ခေါင်းဆောင်နှင့်အငြင်းပွားမှုများနှင့်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကွန်ဂရက်ပါတီမှနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူထောင်ကျနေစဉ် Telangana ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ၁၂၅ နာရီအစာရှောင်ပြီးနောက်သူ၏သကြားနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခဲ့ပြီးဆေးရုံတက်ရခဲ့သည်။
Jaganmohan Reddy သည်သူ၏ဆာလောင်မှုသပိတ်ကာလအတွင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင်သူသည် Praja Sankalpa Yatra အမည်ရှိကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ ရှည်လျားသော Padayatra (ခြေလျင်ချီတက်ပွဲ) ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူသည် Andhra Pradesh ရှိခရိုင် ၁၃ ခုရှိစည်းဝေးပွဲအပိုင်း ၁၂၅ ခုအားလုံးကိုလည်ပတ်ရန်ဤခြေကျင်ခရီးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ချီတက်ပွဲသည်ရက်ပေါင်း ၄၃၀ ကြာခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သူ၏ Padayatra ကာလအတွင်း Jaganmohan Reddy
2019 မေလ 23 ရက်နေ့တွင်သူ၏ပါတီ YSR ကွန်ဂရက်သည် Andhra Pradesh ၏ Assembly Elections ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏သက်တမ်းကြာပြိုင်ဘက် N. Chandrababu Naidu ဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့် ၀ န်ကြီးချုပ်၏ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ရသည်
Jaganmohan Reddy သူ့အနိုင်ရရှိပြီးနောက်
အားလုံးရုပ်ရှင်အမည် mahesh babu
Anil Ambani အိမ်၏ pics
သိုးထီး charan teja ၏ဇနီး